Gonorrhoea - kuyinto ezithathelwanayo Isifo esibangelwa amagciwane, esidluliselwa ngobulili umzimba emzimbeni. Ukutheleleka kuthinta ngokulinganayo kwabesifazane nabesilisa. Ngokuvamile, kuthinta urethra, ingemuva, noma umphimbo. Ngo abesifazane, i-gciwane lingase futhi lasakazekela wesibeletho.
Ukuvimbela isipatsholo kubhekwa lula, njengoba lesi sifo ngokuvamile ngocansi ngokobulili. Noma kunjalo, kungase uhlushwa nezingane osanda kuzalwa uma isifo sitholakale unina. amagciwane Neonates ikakhulukazi kuthinte iso.
Gonorrhoea - isifo lalivamile, okuyinto ezimweni eziningi akubangi izimpawu, yingakho abantu abaningi musa ngisho bazi uma banayo obenesifo.
Ukuze unciphise ingozi izifo ikontraga ezifana isipatsholo, zokuvimbela olwenziwa eyodwa yezindlela ezilandelayo okunye:
Ukungasebenzisi ubuhlobo bobulili;
ukusetshenziswa latex amakhondomu ngesikhathi ngocansi;
ukugcinwa isimiso yokuba nomfazi oyedwa yaphinde mutual (ukuba nobuhlobo obuseduze noNkulunkulu uzakwethu olulodwa).
Womathathu indlela ngenhla kungaba ngokulinganayo ingasetshenziswa ukuvimbela ezinye izifo ezithathelwanayo, nezifo ezithathelwana ngobulili.
Isiguli akusho ngaso sonke isikhathi ngokushesha bayaqaphela ukuthi izinkontileka ukutheleleka, ngakho ukuvimbela kungenzeka wayethole isifo esithile, odokotela batusa ekuseni bajwayelane ukwaziswa okuyisizinda kwengqikithi ethi "isipatsholo". I causative ejenti, ukudluliswa indlela, izimpawu, nokwelashwa - konke wachaza ngokuningiliziwe futhi kufinyeleleke engadingi ochwepheshe limi. Ulwazi okufakiwe kuyoba usizo ikakhulukazi uma ukwenza uzithola izimpawu zokucindezeleka. Ngokuvamile evela zangasese ipheshana ndawo.
Uma unalo igciwane ngendlu ngepheshana elithi zangasese
Xilonga isipatsholo ezingabantu kungaba izimpawu ezilandelayo:
ukuchama buhlungu ;
osenyameni engavamile kusukela enhlokweni yemphambili, nibonakala efana ubomvu;
ubuhlungu noma ukuvuvukala kwesinye isende.
Ngo abesifazane, ukugula, kungasithena ukuzibonakalisa kanje:
anda uketshezi lwesitho sangasese sowesifazane;
ukopha lwesitho sangasese sowesifazane phakathi nezikhathi, ikakhulukazi emva kocansi lwesitho sangasese sowesifazane;
Uma utheleleke nakwezinye izici umzimba
Uma ucabanga ukuthi unayo isifo esinjengo isipatsholo, izinyathelo ezithathwe emuva okuvela izimpawu nobuntu kakade ukufakazela engenamsebenzi. Nakuba ngokuvamile ukutheleleka itholakala ipheshana zangasese, kungaba futhi kungathinta:
Ingemuva. Kulokhu, lo izimpawu zokutheleleka babonwa Ukulunywa kule ingquza, ubovu osenyameni evela ingemuva, izindawo of bright red igazi ku-toilet paper , futhi nobunzima okungazelelwe wamathumbu ukunyakaza (kanye nesidingo ukuba nzima ukuthi baqhube, ukuqunjelwa, nezinye izifo obusebenzayo).
Eyes. Uma isipatsholo kuthinta amehlo, kukhona ubuhlungu, ukuzwela ekukhanyeni, futhi ubovu osenyameni evela oyedwa noma bobabili emehlweni.
Throat. Ngezimpawu zesifo babhekwa njengabantu umphimbo obuhlungu futhi ivuvukele lymph node entanyeni.
Amaqoqo. Uma omunye noma ngaphezulu nemisipha utheleleke nge amagciwane (ukonakala noma sokuqaqamba kwamalunga esithathelanayo), ezindaweni ezithintekile bangase babe efudumele, obomvu, ukuvuvukala ebuhlungu kakhulu, ikakhulukazi uma ushayela.
Lapho ukubona udokotela
Bhalisela i-lodokotela uma uzithola endaweni eyodwa noma eziningi zezimpawu ngenhla ukutheleleka. Ngisho noma izimpawu zesifo nesinye isizathu, ezweni lanamuhla kuba isipatsholo usabalale - izinyathelo zokuvimbela ezinconywe kudorhodere ingakusiza ukuthi uthole ukuthula kwengqondo.
Bheka onguchwepheshe umcimbi ukuthi isifo esithathelwanayo kwatholakala e umlingani wakho. Njengoba isipatsholo uyakwazi asymptomatic, kufanele ihlolwe ngudokotela, ngisho nalapho kungekho izinsolo kokuba utheleleke. Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela ukwelashwa okufanele ngenxa isifo asymptomatic kuzoholela kabusha ukutheleleka of umlingani wakho.
Pathology kubangelwa bacterium abizwa ngokuthi ama "gonococcus", noma kunalokho - of Neisseria gonorrhoeae. Lezi nezilwanyana ezincane eziyingozi bayakwazi ukuya kumuntu nomuntu ngesikhathi ngocansi, kuhlanganise temlomo, anal kanye ocansini lwesitho sangasese sowesifazane.
Ukuvimbela isipatsholo kubantu besilisa nakubantu besifazane kungenzeka nedostachno ngempumelelo uma iziguli basengozini. Izimo ukuthi kwandiswe amathuba igciwane nezifo ezithelelwanayo angase azithole, zihlanganisa:
ushintsho njalo abalingani;
isipatsholo kutholakala ukuthi uphethwe yini esikhathini esidlule, ngisho noma welapheka ngokuphelele;
khona nezinye ingelashwa izifo ezidluliselwa ngocansi by.
Lapho iyekwa ingelashwa isifo imbangela uyakwazi engathi sína, kuhlanganise:
ukungazali Female. Uma ungenawo aphathe ukutheleleka, ke ungasakazekela kwesibeletho futhi amashubhu fallopian futhi ngaleyo ndlela zibangele okhalo isifo ukuvuvukala. Lokhu-ke kuholela nezibazi kuzo ngemibhobho fallopian, kanye nezinkinga zokukhulelwa, futhi kamuva - kanye nenzalo. Ukuvuvukala izitho okhalo - isifo esiyingozi kakhulu okudinga ukwelashwa ngokushesha.
ukungazali Owesilisa. Uma indiva zokuvimbela ezithile isipatsholo futhi umuntu akusho unake impilo yabo, ukuthuthukisa epididymitis - ukuvuvukala encane tube ezigoqile (epididymis) e ngemuva testes, lapho Amapayipi kwesidoda (epididymis). Lokhu ukuvuvukala zisuswe kalula ngosizo yokwelapha ezifanele, kodwa kokuziba ukucobeka kungaholela ukungazali besilisa.
Sabalalisa ukutheleleka emisipheni nezinye izingxenye zomzimba. Igciwane kubangele isipatsholo, ungafaka egazini ngegciwane kwezinye izingxenye zomzimba, kuhlanganise nemisipha. Ngenxa yalokho kukhona ukuqubuka kwesikhumba, imfiva, okuvela izilonda esikhumbeni, ubuhlungu, ukuvuvukala kanye nemisipha ukuqina.
Ukwandisa-HIV / AIDS ukutheleleka ingozi. isipatsholo kwandisa sengozini isiguli igciwane i-human immunodeficiency (HIV), okuholela uphethwe abesabekayo "AIDS". Uma isiguli itholakala kokubili isipatsholo kanye negciwane lesandulela ngculaza, kuba pheze eziyikhulu namashumi amaphesenti okungenzeka uyonika kokubili izifo umlingani ocansini zisencane.
Izinkinga ezinganeni. Uma umama sitholakale isipatsholo lokuvikela izingane akuwona umsebenzi ezingabalulekile kangako. Izinsana azalelwa ngokuzala zemvelo, basengozini. Bona ukutheleleka lungabangela ubumpumputhe, ukulimala kogebhezi ukwakhiwa kwezinye izifo ezithathelwanayo.
Ngaphambi Ukuvakashela udokotela
Uma uneminye izinsolo, kufanele kuqala nodokotela. Uma lesi sifo kuye kwabangela kakade izinkinga ngemva kokuhlinzwa, udokotela kuyokudlulisela onguchwepheshe ezifanele.
Njengoba Ukwelulekwa yezokwelapha ngokwemvelo yabo ngokuvamile kulinganiselwe isikhathi, ukulungiselela kangcono ngenxa emtholampilo kusenesikhathi. izinyathelo ezilandelayo ungathatha:
Cacisa uma ngabe ukuhambisana nanoma imuphi imithetho noma imingcele ngaphambi kokuvakashela udokotela kuyadingeka. Kwezinye izimo, Ochwepheshe zidinga ukuhambisana kusengaphambili nge ukudla ukudla okuthile noma uzokwaliwa yesikhashana noma yisiphi isenzo noma imikhuba emibi.
Yenza uhlu oluningiliziwe nonke ukuzwa izimpawu - ngisho noma kubonakala sengathi lezi emizweni, zichithe noma ezinye izimpawu kungukuthi kuhlobane ngokuqondile isizathu sokuhambela kwakho.
Bhala phansi zonke imithi ukuthi wena njengamanje ukuthatha. Kufanele futhi ungeze kule Vitamin uhlu noma amaphilisi amaminerali, kanye nezinye eziphila abakhuthele ukudla okufakiwe.
Bhala phansi imibuzo ofisa ukubuza onguchwepheshe.
Kusukela kokubonisana Kwenziwa ngokuqinile ngesikhathi esibekiwe futhi ngokuvamile hhayi ngokwanele eside kusengaphambili, lungiselela imibuzo ohlela cela udokotela. Kungcono ukuthi lilinganise kubo kusukela esibaluleke kakhulu ezingabalulekile ekuphileni. Uma isihloko ukuvakashelwa yakho - ukwelashwa kanye nokuvimbela isipatsholo, imibuzo kungaba kanje:
Ingabe isipatsholo izimpawu imbangela olutholwa kimi?
Yiluphi ucwaningo ngidinga idlula?
Ukuthi i-khona ngezinye zezifo ezithathelwanayo, ezifweni ezithathelwana ngobulili?
Ingabe ngidinga umlingani wami futhi uhlole isipatsholo ukutheleleka?
Kufanele ngilinde isikhathi esingakanani ngaphambi lokuvukela umsebenzi wocansi?
Indlela yokuvimbela lesi sifo esikhathini esizayo?
Hlobo luni yezinkinga ukutheleleka ukuba wesabe?
Ngikhulelwe. Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi nokuvimbela isipatsholo e izinsana?
Ingabe ikhona enye nomuthi ebekwe wena?
Ngingaba ukubona izinto thematic ephrintiwe? Noma ungancoma amawebhusayithi ethize?
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukunquma uma ngidinga ukuba eze reception ngemuva kokuphela yokwelapha?
Yiqiniso, lokhu kungenziwa kulekelelwa uhlu eyabonisa yimuphi omunye imibuzo esivuthayo. Futhi kulapho akufanele sibe namahloni okucela udokotela wakho ukuthi yini kwakubonakala engaqondakali yizincazelo zakhe.
Lokho ongakulindela kusukela udokotela
Uma ukhathazekile mayelana kusolwa isipatsholo, nokuvinjelwa, ukwelashwa kanye uphethwe yini kufanele Kunconywa ngudokotela. Ukuze sinikeze iseluleko esinjalo, onguchwepheshe wokuqala imibuzo yabo. Phakathi kwabo, ngokuvamile ezihlanganisa lezi ezilandelayo:
Ngesikhathi uqala uhlangabezana izimpawu ejwayelekile ye isifo esithathelwanayo?
Yiziphi ubunjalo izimpawu zesifo? Ingabe bona isikhathi eside - noma kwenzeke ngezikhathi ezithile?
Indlela okukhulu ukubonakaliswa kugula?
Ingabe sichayeke khona ezifweni ezithathelwanayo, ezifweni ezithathelwana ngobulili?
Ngisho noma ngesikhathi ukuqopha ukuze kuboniswane emtholampilo awusho ukuthi ungakwazi futhi ngeke benze ukubona udokotela, ochwepheshe batusa ukuba nidede ezinkanukweni ubuhlobo bobulili kuze ukuvakashelwa udokotela. Sicela wazise umlingani wakho ukuthi uzithola izimpawu nezifo ezithelelwanayo angase azithole ngendlela esifike ngesikhathi kangangokuthi wayengakwazi ukuya emtholampilo nokudlula luhlolo efanele.
Ukuze ngiqiniseke, ngokwesilinganiso, kwakubikwa zokuvimbela ephumelelayo isipatsholo, noma umzimba wakho isenawo amagciwane ayingozi, udokotela kufanele uhlole cell isampula. amasampula Cell zathathwa kwelinye ngezindlela ezimbili:
Urinalysis. inhlolovo ezisezingeni wembula khona kwegciwane urethra.
Smear indawo ethintekayo. Swab emphinjeni, urethra, esithweni sangasese somuntu wesifazane noma ingemuva ikuvumela ukuqoqa ezincane-eziphilayo, ubunjalo okuyinto ochwepheshe bese unquma ukuthi uyafaneleka egunjini lokucwaninga esibhedlela.
Ikakhulukazi abesifazane, ezinye izinkampani ezenza imithi ukukhiqiza kits sitholakele isipatsholo ekhaya. Le kit kuhlanganisa izinto self-swab esithweni sangasese. Ukukhetha eziqoqiwe kanye amasampula lamaseli EPITHELIAL lwesitho sangasese sowesifazane nazo wathumela ukuze uyihlaziye elabhorethri ezikhethekile. Ngokuvamile, amakhithi enjalo kuhlanganisa amaphrofayli lapho ungacacisa indlela ukuthi umsebenzisi ofisa ukuthola ulwazi mayelana imiphumela yokuhlolwa. Ngezinye izikhathi imiphumela cwaningo kuyatholakala ku-intanethi, kodwa iningi abakhiqizi ukunikela abathengi nje ushayele i-hotline yamahhala.
Prevention of isipatsholo e abesifazane futhi amadoda musa njalo ukukhiqiza umphumela oyifunayo. Endabeni ukungcoliswa nezilwanyana ezincane eziyingozi udokotela ekunika imithi elwa namagciwane. Uma ucabanga ukuthi kungani eminyakeni yamuva nje, nesigqi esisha Neisseria gonorrhoeae nemithi yodokotela, ochwepheshe abaningi batusa ukusetshenziswa ceftriaxone-antibiotic ngesimo umjovo ngesikhathi esifanayo ne azithromycin noma doxycycline. Eminyakeni emibili imithi elwa namagciwane ezithathwe ngomlomo.
Ngokocwaningo lwamuva kumele kuphetfwe ukuthi ukusebenza kahle eliphezulu libhekene ukusetshenziswa gemifloxacin noma umjovo gentamicin kanye nokuphathwa ngemlomo ngaloko lokusandza kwenteka azithromycin. Lokhu kukhetha kubaluleke kakhulu ezigulini ezizwelayo ku-ceftriaxone.
Uma sithola umama isipatsholo nokwelashwa kwezifo kule osanda kuzalwa iqala ngokushesha ngemva kokuzalwa wabo. Ukuvimbela ukuthuthukiswa ukutheleleka emehlweni abantwana abancane bembe amathonsi ekhethekile. Uma lesi sifo namanje kuthinta amehlo, udlulela ukwelashwa ngemithi elwa namagciwane.
Thatha izinyathelo zabo ukuze bazivikele yizifo ngokucindezela obenesifo:
Sebenzisa ikhondomu latex ngesikhathi ocansini. Ngaphandle kokungabaza, ekuzileni ubuhlobo bobulili - kungenzeka lokhu kuphela amaphesenti ayikhulu indlela eqinisekile ukuvimbela isifo. Nokho, ukhona egcwele indoda idinga impilo ocansini esitebeleni. Ukuze bazivikele ezingozini lokho kusho zonke socansi, kubalulekile ukusebenzisa latex amakhondomu. Lo mthetho awasebenzi kuphela ucansi lwesitho sangasese sowesifazane kodwa futhi anal futhi ngomlomo.
Buza umlingani wakho ukuba okwaxoxwa ukuthola izifo, izifo ezithathelwana ngobulili.
Ungahlanganyeli ekuziphatheni ngokocansi nezitho ngokusobala abantu abaphethwe izimpawu ezithile ukutheleleka - ikakhulukazi isifo yingozi like isipatsholo. Prevention ngokufingqiwe kafushane ngendlela elandelayo: uma umlingani wakho ekhononda ka ukuchama ubuhlungu noma ukuqubuka esikhumbeni isibunu, kufanele uyeke nobuhlobo bobulili lowo muntu.
Uma basengozini, njalo ngaxoxa nabo ezinhloko-umtholampilo.
Phakathi ubulili bendabuko, kanye ikhondomu latex kuyinto efiselekayo ukusebenzisa spermicides.
Izimpawu ze-meningitis. Ukulapha nokuvikela izifo
Umusa ngeke ngisindise izwe. Uthando ngeke ngisindise izwe. Izingane ngeke ngisindise izwe (izithombe)
Ukuvutshelwa acidosis: ubuchwepheshe kanye nezinto ezidingekayo. Heterofermentative acidosis acid ukuvutshelwa